MAHENDRA SINGH DHONI အမြင့်၊ အသက်၊ မိန်းကလေး၊ ဇနီး၊ ကလေး၊ မိသားစု၊ - ခရစ်ကက်
Mahendra Singh Dhoni အမြင့်၊ အသက်၊ မိန်းကလေး၊ ဇနီး၊ ကလေး၊ မိသားစု၊
အဓိက / ခရစ်ကက်
နာမည်အပြည့်အစုံ Mahendra Singh dhoni
ရရှိသောအမည်များ MSD, က MS, ဗိုလ်ကြီး Cool
အလုပ်အကိုင် ခရစ်ကက် (ကက်ထိန်းချုပ်)
အမြင့် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) စင်တီမီတာ၌တည်၏ - 175 စင်တီမီတာ
မီတာအတွက် - 1.75 မီတာ
ပေလက်မ၌တည်၏ - ၅ '၉ '
အလေးချိန် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ကီလိုဂရမ်၌တည်၏ - 75 ကီလိုဂရမ်
ပေါင်ထဲမှာ - 165 ပေါင်
ကိုယ်ခန္ဓာတိုင်းတာမှုများ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) - ရင်ခေါင်း - ၄၂ လက်မ
- ခါး - ၃၂ လက်မ
- Biceps: ၁၄ လက်မ
နိုင်ငံတကာပွဲ ဦး ထွက် ODI- ဒီဇင်ဘာ ၂၃ - စစ်တကောင်းတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်
စမ်းသပ်မှု ချန်နိုင်းတွင်သီရိလင်္ကာကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်
T20 - ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် Johannesburg ၌တောင်အာဖရိကကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်
နောက်ဆုံးပွဲ ODI - ဇူလိုင်လ ၉ ရက်၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Emirates Old Trafford ၌နယူးဇီလန်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်
စမ်းသပ်ခြင်း - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ Melbourne Cricket Ground တွင်သြစတြေးလျကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်
T20 - ၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ တွင်တောင်အာဖရိကကို Wanderers အားကစားကွင်း၌ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်
နိုင်ငံတကာအငြိမ်းစား သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊  နင်
ဂျာစီနံပါတ် နံပါတ် ၇ (အိန္ဒိယ)
နံပါတ် ၇ (IPL)
ပြည်တွင်း / ပြည်နယ်အဖွဲ့ (များ) Asia XI၊ Bihar၊ Chennai Super Kings၊ Jharkhand, Rising Pune Supergiants
နည်းပြ / ဆရာ Keshav Banerjee နှင့် Chanchal Bhattacharya
ဘိုးလင်းပုံစံ Right-Arm မြန်အလတ်စား
အကြိုက်ဆုံးရိုက်ချက်များ ရဟတ်ယာဉ် Shot နှင့် Paddlesweep
Field on Nature အေးဆေးတည်ငြိမ်
မှတ်တမ်းများ (အဓိကမှတ်တမ်းများ) အိန္ဒိယအသင်းသည်သူ၏အသင်းခေါင်းဆောင်လက်အောက်တွင်ပုံစံ (၃) ခုစလုံးတွင်အဓိကပြိုင်ပွဲများကိုအောင်နိုင်ခဲ့သည်။ (၁၈) လ (၂၀၀၁-၂၀၁၁) နံပါတ် (၁) စမ်းသပ်မှုအဆင့်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ODI ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ၂၀၁၃ တွင်ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားနှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားနှစ်ဆယ် ၂၀ ။
•ရာစုနှစ်များစွာ ODIs တွင်နံပါတ် ၇ နေရာတွင်ရှိသည်။
• International Cricket မှ ၆ တန်းအများစုသည်ကပ္ပတိန်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
• ODIs ရှိကက်ထိန်းသူသည်အမြင့်ဆုံးရမှတ် (၁၈၃ ပြေး) ။
•နံပါတ် ၇ ကိုရိုက်နေတုန်း ODI ရာစုနှစ်ကိုဂိုးသွင်းဖို့အသင်းခေါင်းဆောင်ပဲ
•ပထမဆုံးအိန္ဒိယကက်ထိန်းသူသည်စမ်းသပ်ပြေး ၄၀၀၀ ဂိုးသွင်းခဲ့သည်။
•စမ်းသပ်မှုများမှအိန္ဒိယကပ္ပတိန်တစ် ဦး ၏အမှတ်ပေး (၂၂၄ ပြေး) ။
Ricky Ponting (324) နှင့် Stephen Fleming (303) တို့ပြီးလျှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပွဲ ၃၀၀ ကျော်တွင်ကပ္ပတိန်အားတတိယမြောက်အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။
•ပုံစံ (၃) ခုစလုံးတွင်ပွဲ ၅၀ ကျော်ကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအသင်းခေါင်းဆောင်။
• ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်သူသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Twenty20 အင်တာနေရှင်နယ်တွင် (အများဆုံးပွဲစဉ် ၉၁ ပွဲတွင်အငြင်းပွားမှု ၃၃ ခု) တွင်အမြင့်ဆုံးမှတ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
အလုပ်အကိုင်အလှည့်အပြောင်း ကင်ညာနှင့်ပါကစ္စတန်အေတို့အကြား ၂၀၀၃/၀၄ သုံးပွင့်ဆိုင်ပြိုင်ပွဲတွင်စွမ်းရည်ပြခဲ့ပြီး ၆ ပွဲတွင် ၃၆၂ ပွဲကစားခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၇၂.၄၀ ဖြစ်သည်။
ဆုများ, ဂုဏ်ထူး, အောင်မြင်မှုများ အမျိုးသားဆု
• Rajiv Gandhi Khel Ratna (၂၀၀၇)
• Padma Shri (၂၀၀၉)
• Padma Bhushan (2018)
MTV ၏လူငယ်အိုင်ကွန် (၂၀၀၆)
•တစ်နှစ်တာ ICC ODI ကစားသမား (၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉)
•အားကစားတွင်တစ်နှစ်တာ CNN-IBN India (၂၀၁၁)
•ခရစ်ကတ်စိတ်ဓာတ်အတွက် ICC ဆု (၂၀၁၁)
မွေးနေ့7ဇူလိုင်လ 1981
ခေတ် (၂၀၂၀ တွင်ကဲ့သို့) ၃၉ နှစ်
မွေးရပ်မြေ Ranchi, Jharkhand, အိန္ဒိယ (ထို့နောက် Bihar တွင်)
ဇာတိမြို့ Ranchi, Jharkhand, India
ကျောင်း DAV Jawahar Vidya Mandir, Shyamali, Ranchi, Jharkhand
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် စိန့် Xaviers ကောလိပ်, Ranchi, Jharkhand
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း ကောလိပ် Dropout
လိပ်စာ Harmu Housing ကိုလိုနီ၊ Ranchi, Jharkhand, India
ဝါသနာ စက်ဘီးစီးခြင်း, ဘောလုံးနှင့်တင်းနစ်ကစားခြင်း၊ ရေကူးခြင်း
အငြင်းပွားမှုများ • ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ၄ င်း၏နေထိုင်သူ ၄၀ သည် M.S. တွင်ရေ ၁၅၀၀၀ လီတာဖြုန်းတီးရန် Ranchi Regional Development Authority (RRDA) အားအယူခံတင်ခဲ့သည်။ Dhoni ၏ရေကူးကန်ကိုနေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ ထိုအချိန်ကသူနေထိုင်ရာဒေသသည်ရေအကျပ်အတည်းနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ [နှစ်ခု] India Times
•သူသည်သူ၏ Hummer H2 နှင့် ပတ်သက်၍ အခွန်ရှောင်မှုအငြင်းပွားမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ယာဉ်သည်အိန္ဒိယတွင်မှတ်ပုံတင်ကြေး ၄ သိန်းကျော်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းကိုမှတ်ပုံတင်ရန်တာဝန်ရှိသည့် ၅၃၀၀၀ ဖြစ်သော Mahindra Scorpio အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။  Indian Express
• ၂၀၁၃ IPL ကိုပြုပြင်ခြင်းကာလအတွင်း Dhoni သည်တရားရုံးချုပ်၏ရေဒါတွင်ရှိနေခဲ့သည်။ သူသည်လောင်းကြေးငွေစာရင်းတွင်အမည်ရှိသူ Gurunath Meiyappan နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Dhoni က 'ခရစ်ကတ်ဝါသနာရှင်မျှသာ' ဟု Gurunath Meiyappan ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော် Meiyappan သည်အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။  Hindustan Times သတင်းစာ
• ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သူသည် Amrapali အိမ်ခြံမြေအဖွဲ့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်ကြီးအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ Amrapali ယူနစ်တစ်ခုမှနေထိုင်သူများသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်ကြုံတွေ့ပြီးနောက်လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဆက်နွယ်မှု & ပို
ရေးရာ / မိန်းကလေး Priyanka Jha (၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်)
Lakshmi rai (တောင်အိန္ဒိယမင်းသမီး)
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် ၂၀၁၀ ဇူလိုင် ၄
ဇနီး / အိမ်ထောင်ဖက် Sakshi Dhoni
ကလေးများ သမီး - Ziva
သူတို့က - မရှိပါ
မိဘများ ဖခင် - Pan Singh (MECON ၀ န်ထမ်း၊ အငယ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနေရာတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်)
အမေ - Devki Devi
မောင်နှမများ အစ်ကို - Narendra Singh Dhoni (အသက်ကြီးနိုင်ငံရေးသမား)
နှမ - ဂျေးတီဂူပါ (အကြီးအကဲ)
ခရစ်ကက် (များ) Batsmen: Sachin Tendulkar အာဒံ Gilchrist
ပစ်သူများ Glenn McGrath, Brett Lee
ခရစ်ကက်ကွင်း (များ) Lord's Cricket Ground, London
Melbourne Cricket Ground (MCG)၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့
အစားအစာ ကြက်ဥထောပတ်မဆာလာ၊ ကြက်သား Tikka ပီဇာ၊ Kebabs၊ Yellow Dal၊ Sonpapdi, Gulab Jamun နှင့် Rasgullas
ဘောလုံးကစားသမား Cristiano ရော်နယ်ဒို
သရုပ်ဆောင် (များ) Amitabh Bachchan , John abraham
မင်းသမီး Angelina ဂျိုလီ , Deepika Padukone
ရုပ်ရှင်များ) Agneepath, Sholay
ဂီတပညာရှင် Kishore Kumar က
အရောင် (များ) အပြာနှင့်အနက်ရောင်
ခရီးလမ်းဆုံး (များ) သီရိလင်္ကာ, Goa
ကားများစုဆောင်းခြင်း ပွင့်လင်း Mahindra Scorpio, Maruti SX4, Hummer H2, Toyota Corolla၊ Land Rover Freelander, GMC Sierra၊ Mitsubishi Pajero Sfx, Mitsubishi Out Lander, Porsche 911, Audi Q7 SUV၊ Ferrari 599, Jeep Grand Cherokee, Pontiac Firebird Trans Am
စက်ဘီးစုဆောင်းခြင်း Kawasaki Ninja H2၊ Confederate Hellcat, BSA, Suzuki Hayabusa၊ Norton စပျစ်သီး၊ Hero Karizma ZMR, Yamaha Rxz, Yamaha Thundercat, Yamaha Rx, Ducati 1098, Yamaha Rd 350, Tvs Apache၊ Kawasaki zx14r Ninja၊ အဆီကောင်လေး၊ Enfield Machismo၊ စိတ်ကြိုက်တီဗီဖုန်စက်ဘီး
လစာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး 15 Crore (IPL 2019)
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ဒေါ်လာ ၁၀၃ သန်း  MSN
shrenu parikh မွေးသက္ကရာဇ်
Mahendra Singh Dhoni အကြောင်းလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Mahendra Singh Dhoni ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား
Mahendra Singh Dhoni သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
Dhoni ကိုအလယ်အလတ်တန်းစား Rajput ရဲတိုက်မှမွေးဖွားခဲ့သည်။
သူသည် ၁၀ ကြိမ်မြောက်စာမေးပွဲတွင် ၆၅% ရခဲ့သည်။
၁၉၉၃ တွင်သူ၏ကျောင်းမှခရစ်ကက်နည်းပြဖြစ်သော KR Banerjee ကဂိုးသမားအဖြစ်ပထမဆုံးသူ့ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သူသည်လက်ကိုကတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်ကြိုးစားရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ငယ်ရွယ်သောကာလ၌က MS Dhoni
Jamshedpur မှာရှိတဲ့ Talent Resource Development Wing (TRDW) ပွဲစဉ်မှာသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အလားအလာကောင်းတွေတွေ့ခဲ့ရသူပါ။ ထို့နောက် ၁၉၉၈/၉၉ ရာသီတွင် Bihar U19 အသင်းတွင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးပွဲစဉ် ၅ ပွဲတွင် ၁၇၆ ပွဲကစားခဲ့သည်။
၂၀၀၂ တွင် Dhoni သည်အိန္ဒိယအသင်းတွင်နေရာတစ်ခုရရန်ကြိုးစားစဉ် Priyanka Jha အမည်ရှိမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ချစ်မိခဲ့သည်။ သို့သော်ကံမကောင်းစွာ Priyanka သည်ထိုနှစ်တွင်ပင်မတော်တဆမှုတစ်ခုအတွင်းသေဆုံးခဲ့သည်။
သူသည် ၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၃ အထိ Bihar အတွက်အကြီးတန်းကစားခဲ့သူဖြစ်သော်လည်းအရှေ့ဇုန်ရွေးချယ်ရေးမှူးများကသူ၏တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်အနောက်ဘင်္ဂလားသို့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ 2003) ။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Sourav Ganguly သူသည် Kolkata သို့ပြောင်းရန်ချဉ်းကပ်ခဲ့သော်လည်းသူသည်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး Bihar သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ သူသည် National Cricket Academy သို့သွားခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၏ ODI ပွဲ၌သူသည်ဘဲထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
Dhoni သည်သူ၏ပထမဆုံး ODI ရာစုကို Vishakapatnam ရှိပါကစ်စတန်ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
အစောပိုင်းကသူသည်အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်ရှည်လျားသောဆံပင်များရှိခဲ့ဖူးပြီး၊ John abraham ဒုတိယအနေနဲ့သူကကံကောင်းတာကိုစဉ်းစားလေ့ရှိတယ်။
MS Dhoni ၏အစောပိုင်းကြည့်ရှုခြင်း
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်သူသည် MTV Youth Icon အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
သူ၏အစောပိုင်းအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှု၌ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရရှိပြီးနောက်၌ပင်သူသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအခြေကျကာအချိန်ကုန်ခဲ့သည်။
အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် Sachin Tendulkar အဘယ်သူသည်အိန္ဒိယပုရစ်အသင်းဘယ်တော့မှအရင်ကကဲ့သို့အထွreached်သို့ရောက်သောအပြီး, 2007 ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အသင်းခေါင်းဆောင်များအတွက်သူ၏အမည်ကိုအကြံပြုခဲ့သည်။
သူနှင့်သူ၏ဇနီး Sakshi တို့သည်ငယ်စဉ်ကတည်းကတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သိကျွမ်းခဲ့ကြသော်လည်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်ဆောင်းရာသီတွင်၎င်းတို့သည် Kolkata ၌တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Yhhhajit Dutta (Dhoni ၏မန်နေဂျာနှင့်မိတ်ဆွေ) မှစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့မန်နေဂျာထံမှသူမ၏နံပါတ်တောင်းသူ Dhoni ခဲ့, သူသည်နောက်ပိုင်းတွင်သူမ၏ messaging သောအခါသူမကကန ဦး ကမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ဟာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ၃ နှစ်ကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ကြတယ်။
အိန္ဒိယနယ်မြေတပ်မတော်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဖြစ် MS Dhoni
သူသည်အိန္ဒိယတွင်အခွန်ထမ်းအားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃၊
Dhoni သည်သရုပ်ဆောင်ကောင်း၏သူငယ်ချင်း။ John abraham ။
ဂျွန်အာဗြဟံနှင့်အတူ MS Dhoni
သူသည်ခေတ်သစ်ခရစ်ကတ်တွင်အကောင်းဆုံးအနိုင်ရရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးခြောက်ကြိမ်ရိုက်ခြင်းဖြင့် ODI ပွဲများကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ လူသိများသည်မှာသီရိလင်္ကာနှင့် ၂၀၁၁ ICC ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင်အနိုင်ရခဲ့သည်။
Dhoni သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်ကွယ်လွန်သွားသောသူ၏ကလေးဘဝမိခင်ဖြစ်သူ Santosh Lal ထံမှသူ၏လက်မှတ်ထိုးရိုက်ချက် 'Helicopter Shot' ကိုသင်ယူခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူသည် Forbes မဂ္ဂဇင်း၏ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ၀ င်ငွေအားကစားသမားတစ်ယောက် (ကမ္ဘာပေါ်တွင်နံပါတ် ၃၁) ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဝိန်းရွန်နီ နှင့်ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးလူ Usain Bolt က ။
Ranchi မှာနာမည်ပေးထားတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုရှိတယ်။ ‘ Mahi Residency သူသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယအမျိုးသားခရစ်ကက်အသင်း၏အသင်းသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်ဟိုတယ်ကိုနာမည်ကျော်ခဲ့သည်။
Ranchi ရှိ MS Dhoni ရဲ့ဟိုတယ်
Dhoni သည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ချစ်သူဖြစ်ပြီးခွေးကြီး ၂ ကောင်ရှိသည် အမှုန် နှင့် Alsatian အမည်ရှိ ဆမ် ။
သူသည်စက်ဘီးစီးသူဖြစ်ပြီး of ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ Mahi ပြိုင်ပွဲအဖွဲ့အိန္ဒိယ Sup Supersport ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်တွင်။
က MS Dhoni ရဲ့ Mahi ပြိုင်ပွဲအဖွဲ့အိန္ဒိယ
2016 ခုနှစ်တွင်သူသည် Rhiti Group နှင့်အတူဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် 'Seven' ကိုစတင်ခဲ့သည်။
သူ၏ biopic ထုတ်လုပ်သူများထံမှ cro ကု₹ေ ၄၀ ကိုယူခဲ့သည်ဟုကောလဟာလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည် ဒေါ်။ Dhoni: ဒီမရေမတွက်နိုင်သောပုံပြင် (2016), သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် Sushant Singh က rajput ။
သူသည်“ ပြောက်ကျား” အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုနှစ်သက်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်Aprilပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင်သူသည် Indin ၏တတိယမြောက်အရပ်သားဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ Padma Bhushan President သမ္မတမှ Ram Nath Kovind ။ Dhoni သည်စစ်မှန်တဲ့ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် Rashtrapati Bhavan ရှိဂုဏ်အသရေရှိသူများကိုကျော်ဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီဂုဏ်သိက္ခာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခဲ့ပါတယ်
၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁၅ တွင်သူသည် Instagram post မှတဆင့်နိုင်ငံတကာပုရစ်မှအနားယူကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
၁၉၂၉ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်အားအငြိမ်းစားယူမှတ်သော ur ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ထောက်ပံ့မှုအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်
မျှဝေသည် M က S Dhoni 7:01 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 15, 2020 ရက်တွင် ((mahi7781 @)
၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁၅ တွင်သူ၏ဇနီး၊ Sakshi Dhoni သူမ၏ Instagram အကောင့်တွင် Pontiac Firebird Trans Am (1970 မှကြွက်သားကား) အနီရောင်တောက်ပသောအနီရောင်၏ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုကိုမျှဝေခဲ့သည်။ ကားများက MS Dhoni ရဲ့ငြူစူသောစိတ်စုဆောင်းမှုအသစ်ဖြည့်စွက်ကြိုဆို။
အိမ်ကိုကြိုဆိုပါတယ် @ mahi7781 @ ပျောက်နေတယ် ... # transam
မျှဝေသည် Sakshi Singh Dhoni (@sakshisingh_r) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁၅ ရက်၊ ည ၅း၃၀ တွင် PDT
ဗိုလ်မှူး Mahi mahi7781 @ ပျောက်ဆုံး!
နေသာ Deol မိသားစု
မျှဝေသည် Sakshi Singh Dhoni (@sakshisingh_r) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁၅ ရက်၊ ည ၄း၄၂ တွင် PDT
↑နှစ် India Times
↑၃ Indian Express
↑၄ Hindustan Times သတင်းစာ
Bikramjeet Kanwarpal အသက်၊ သေခြင်း၊ ဇနီး၊ ကလေးများ၊ မိသားစု၊
Rochelle Rao ခေတ်၊ ခင်ပွန်း၊ မိသားစု၊
Travis Kalanick (Uber တည်ထောင်သူ) အသက်၊ ဇနီး၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ နုတ်ထွက်အကြောင်းရင်းနှင့်အခြားအရာများ
Vidisha Srivastava အမြင့်၊ အလေးချိန်၊ အသက်၊ အရေး၊
Afsana Ara Bindu (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မင်းသမီး) အမြင့်၊ အလေးချိန်၊ အသက်၊ ယောက်ျားလေး၊ ခင်ပွန်းသည်၊
iru malargal prabha အမည်ရင်း
စင်တီမီတာအတွက် aamir khan အမြင့်
အဆိုတော် ali ဇနီးဓာတ်ပုံကို javed
Krishna (Tamil သရုပ်ဆောင်)
Justin Bieber အမြင့်နှင့်အလေးချိန်
samit dravid နှင့် anvay dravid